Ilay niandohan’ny lalàna rehetra
"Endrey ny fitiavako ny lalànao! Fisaintsainako mandrakariva izany." — Sal. 119:97.
Hita eo amin'ny voary rehetra ny dian-tanan' Andriamanitra. Mijoro ho vavolombelony ny zavaboary. Rehefa mifandray amin'ny zava-mahatalanjona sy ny zava-miafin'izao tontolo rehetra izao ny saina mora mahatsapa dia tsy hanao afa-tsy ny miaiky ny fiasan' ilay hery tsy manam-petra. Tsy avy amin'ny heriny manokana no amokaran'ny tany ireo vokatra ao aminy, sy hihodinany eo amin'ny masoandro isan-taona. Tanana tsy hita maso no mandrindra ny fizotr'ireo planeta any amin'ny habakabaka. Fiainana mifono zava-miafina no manenika ny zavaboary rehetra - aina izay mihazona ireo tontolo tsy hita isa any ambony tsy taka-maso (...)
Izany hery mihazona ny zavaboary izany ihany no miasa ao anatin'ny olombelona. Ny lalàna izay mibaiko ny kintana sy ny atôma ihany no mifehy ny fiainan'olombelona. Ny lalàna mandrindra ny fiasan'ny fo izay mitondra aina ao amin'ny vatana dia lalàn'Ilay fahalalana lehibe izay mifehy ny fanahy. Avy Aminy no nisiam-piainana, ary ny firindrana Aminy ihany no ahitana ny tena asany marina. Mitovy ny fepetra ho an'ireo zavaboary noforoniny rehetra: fiainana tohanan'ny aina avy amin'Andriamanitra, ary fiainana mifandrindra amin'ny sitrapon'ny Mpamorona. Ny fandikana ny lalàny, na ara-batana izany na ara-tsaina, na koa ara-pitondrantena, dia fialana amin'ny firindrana amin'izao tontolo rehetra izao, ary koa fampidirana ny korontana sy ny baranahiny ary ny faharavana.
Tonga mazava ho an' ireo izay mandalina mba hanakatra ny fampianarany ny natiora; bokin-desona izao tontolo izao, ary sekoly ny fiainana. Tsy maintsy misy akony eo amin'ny fomba fisainana sy mamolavola ny toetra ny fifandraisan'ny olombelona amin'Andriamanitra sy ny natiora, ny lalàn'ny lanitra mifehy an'izao tontolo, ary ny vokatry ny fandikan-dalàna.
Lesona tokony hianaran'ireo zanatsika izany. Amin' ireo madinika izay tsy mbola afaka hianatra amin'ny alalan'ny pejy voasoratra na hiditra an-tsekoly, dia loharano tsy ritra izay mitondra fifaliana ho azy ireo ny natiora. Ny fo izay tsy mbola nohamafisin'ny fifaneraserana amin'ny ratsy dia mora manaiky Ilay fanatrehana izay mifehy izao voary rehetra izao. Ny sofina izay tsy mbola donton'ny tabataban'izao tontolo izao dia ho liana amin'Ilay feo izay miteny amin'ny alalan'ny feon'ny zavaboary. — FK, tt. 107,108.